Documentary – Channel Myanmar
Halftime (2022) Halftime (2022)ဆယ်စုနှစ်သုံးခုစာလောက် မပြောင်းလဲဘဲရှိနေတာက ဒီကမ္ဘာမှာ ဘယ်လောက်များနိုင်မှာလဲ ဒါပေမဲ့ သူ(မ) တစ်ယောက်ကတော့ Immortal နတ်ဘုရားမလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကတည်းကနေ အခုထိရှင်သန်ဆဲပါ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ သူ(မ)ဆိုတာကတော့ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့ Jennifer Lopez ပါ ဒီတစ်ခေါက် သူ(မ)ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို Netflix က Documentary အနေနဲ့ရိုက်ထားတာကို CM ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေက လွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိကြသလိုမျိုးပဲ သူ(မ) ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ် ဒီနေရာအထိရောက်အောင် ဘယ်လိုတွေစွမ်းဆောင်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ သူ(မ)ရဲ့ မိသားစုအကြောင်းအပြင် သူမရဲ့အတွေးအခေါ်၊ ခံယူချက်တွေကိုပါ အင်တာဗျူးအနေနဲ့ ပြောပြပေးသွားမယ့် အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုပါ အများကြီးညွှန်းစရာတော့မရှိပါဘူး J.Lo ဆိုတာကို မသိတဲ့လူမရှိသလောက်မို့လို့ fan မဟုတ်ရင်တောင် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ Documentary တစ်ခုပါပဲနော်အညွှန်းကိုတော့ Joyz က ရေးထားပေးပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာကတော့ Thuu, Hmwe နဲ့ NoX တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Genre..... Documentafy, Music Quality…. 1080p | 720p | 480p File size… 2.2GB | 1.1GB ...
Eating Our Way to Extinction (2021) Eating Our Way to Extinction (2021) ~ IMDb Rating - 7.5/10 ~လူ​တွေအသက်ရှင်ဖို့ အာဟာရဖြစ်ဖို့ စား​နေတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ​တွေက တစ်ချိန်မှာ လူသားမျိုးနွယ် မျိုးတုန်းမှုရဲ့ အဓိကအ​ကြောင်းရင်းကြီးတစ်ချက်လို့ပြောရင် ဟာသပြက်လုံးလို ဖြစ်​​နေမှာ​သေချာပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ကဏ္ဍ​ပေါင်းစုံက သု​တေသနပညာရှင်​တွေ နှစ်​ပေါင်းများစွာ လုပ်လာတဲ့ သု​တေသန​ရလဒ်​တွေ၊ အစီရင်ခံစာ​တွေက ဒီယူဆချက် မှန်ကန်​ကြောင်း သက်​​သေထူ​နေပါတယ်။ကမ္ဘာ့လူဦး​ရေတစ်​နေ့တခြား များလာတာနဲ့အမျှ စားနပ်ရိက္ခာ​တွေ ပိုလိုအပ်လာသလို အသားစားသုံးမှုနှုန်းက တိုးပွားလာတဲ့အတွက် ​မွေးမြူ​ရေးလုပ်ငန်း​တွေ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တွင်ကျယ် လာပါတယ်။ ဒီ Documentary ထဲမှာ ​မွေးမြူ​ရေးလုပ်ငန်း​တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တို့လုံးဝမသိရှိထားတဲ့၊ လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်​တွေ အဖြစ်မှန်​တွေကို သု​တေသနရလဒ်​တွေနဲ့အညီ ​သေချာ​ဖော်ထုတ်တင်ဆက်ထားတာပါ။မင်းသမီးကြီး ကိတ်ဝင်းစလတ်ကိုယ်တိုင် Narrator အဖြစ်ပါဝင်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု ပညာရှင်​တွေ၊ မိုး​လေဝသပညာရှင်​တွေ၊ အစာအာဟာရပညာရှင်​တွေ စုံစုံလင်လင် ပါဝင်ထားပြီး ...
Women of the White Buffalo (2022) အ​မေရိကကို ဒီမိုက​ရေစီဘိုး​တော်နိုင်ငံ၊ လူ့အခွင့်အ​ရေးကို တန်ဖိုး အထားဆုံး နိုင်ငံ​တွေထဲက တစ်ခုအဖြစ်ပြောကြလျှင် လူတချို့က ရယ်ကြလိမ့်မည်၊ ထိုလူ​တွေက တခြားမဟုတ် အ​မေရိကန်နိုင်ငံမှာ ​နေထိုင်ကြတဲ့ ယူအက်စ်နိုင်ငံသား​​တွေလို့ ​ပြောရင် နည်းနည်း​တော့ ဆန်း​နေလိမ့်မည်၊ နိုင်ငံသားဟုဆိုရာ​တွင် ကိုလံဘတ်စ်​ရောက်ပြီး ​​နောက်ပိုင်း တစ်စတစ်စ​ ရောက်လာသည့် ဥ​ရောပမျိုးစပ်များကို ​ပြောတာမဟုတ်​ပေ၊ အင်ဒီးယန်းအပါအဝင် ​အ​မေရိကတိုက်ဟူ၍ ရှိကတည်း​က ​နေထိုင်လာကြသည့် ​ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ဒီးယန်းသားတို့ ဤသို့ ခံစားရသည်မှာ အ​​ကြောင်းရှိသည်၊ ကိုလံဘတ်စ် အ​မေရိကတိုက်ကို စတင်​တွေ့ရှိခဲ့သည့် ၁၄၉၂တွင် သန်း၈၀​ကျော်ရှိခဲ့​သော ​​​ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများသည် ၂၁ရာစု အ​စောပိုင်း​တွင် ၉၀%​ကျော် ဆုံးရှုံးသွားပြီး ​​သိန်းဂဏန်းခန့်သာ ကျန်ရစ်​​တော့သည်အထိ ဥ​ရောပမျိုးစပ် - အ​မေရိကန်များသည် ​ဒေသခံ အ​မေရိကန်နိုင်ငံသား စစ်စစ်များအ​ပေါ် ဖိနှပ်ချိုးနှိမ်မှု ​ပေါင်းစုံ ကျူးလွန်ခဲ့သည်၊ နယ်​မြေများကို သိမ်းပိုက်ပြီး သီးသန့် နယ်​မြေငယ်များ ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်မပြည်သူများနှင့် အဆက်ဖြတ် ခဲ့သည်၊ ဒါတင်မကဘဲ နိုင်ငံသားစာရင်းက​နေ ​ဖျောက်ပစ်ဖို့အထိ စနစ်တကျ​ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်၊ စာအဖြစ်သာ​ပြောရရင် ယုံနိုင်စရာမရှိ​​ပေမယ့် အင်ဒီးယန်းနွယ် ဖြစ်သည့် လာကိုတာမျိုးနွယ်များသည် ဒီလိုဖိနှိပ်မှုဒဏ်များကို အဆိုးဆုံး ခံစားခဲ့ရသူ​တွေဖြစ်သည်၊ ယခုDocumentaryတွင် အထက်ပါ ဖိနှိပ်မှုများအပြင် အ​မေရိကန်သမိုင်း၏ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်ဆုံးWounded Knee ...
Look At Me: XXXTENTACION (2022) Look at Me: XXXTentacion IMDb-7/10, Rotten Tomatoes-89%ဒီ Documentary မှာတော့ ရက်ပ် ဆိုရင်လည်း ကြမ်းပြီး သီချင်းဆိုရင်လည်းချိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွယ်လွန်လေပြီးသော စွယ်စုံရအဆိုတော်ကြီး XXXTentacion (Jahseh Onfroy) ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်X ဟာ အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်တည်းက စိတ်ကျဝေဒနာရှင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ သူ့ရဲ့ဂီတလမ်းကြောင်းကလည်း ဟိုးအစတည်းကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ရော ဘေးလူတွေကြောင့်ပါ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကြမ်းတမ်းပြီးအကျည်းတန်ခဲ့ပါတယ် သို့သော် သူ့သီချင်းတွေကတော့ လူအများကြီးရဲ့ဘဝကို ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်...သူ့အကြောင်းကိုဖော်ပြသွားတဲ့နေရာမှာလည်း မိသားစု သူငယ်ချင်း ချစ်သူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပရိတ်သတ် စသဖြင့်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေရိုက်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် X ကိုအမြင်မျိုးစုံနဲ့မြင်ရမှာပါ အားလုံးထက်X ကိုယ်တိုင်ဖြေထားတဲ့ Interview တွေနဲ့ ဗီဒီရိုတွေကိုပါ ထည့်သွင်းပြသထားတာကြောင့်X တစ်ယောက် အသက်ရှင်နေသေးသလားလို့တောင် အောက်မေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...ဂီတလောကကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ခံစားချက်မျိုးစုံနဲ့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ Documentary လေးကို X fan တွေအတွက်ရောX fan ...
Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (2022) Cyber Hell : Exposing an Internet Horror (2022)IMDb - 6.5/10ဒီDocumentaryဟာ ၂၀၁၉ ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး ဆိုက်ဘာပြစ်မှု​တွေထဲက၂ခုအ​ကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်​တွေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ IT​ခေတ် ဖြစ်တာနဲ့အညီ နည်းပညာနဲ့ ကျွမ်းဝင်သူ​တွေ များသလို ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီး မသိနားမလည်သူ​တွေအ​ပေါ် ကျူးလွန်လာတဲ့ဆိုက်ဘာပြစ်မှု​တွေက တစ်​နေ့တခြား များလာသလို နည်းလမ်း​တွေလည်း ပိုစုံလာပါတယ်၊ ဒီ Documentary မှာဆိုရင်​ နည်းပညာကိုအသုံးချပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ် စီးပွားရှာသွားသူ​တွေအ​ကြောင်း မြင်​တွေ့ရမှာပါ။ဘယ်လိုပုံစံမျိုး​ ကျူးလွန်သွားမလဲဆိုတာ အညွှန်းထဲရေးတာထက် ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တာက ပိုပြီးအ​ဆင်​ပြေပါတယ်၊ ​ ဒီ​​နေ့​ခေတ်မှာ လူတိုင်းကြုံ​တွေ့​နေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကိုပဲချနင်းပြီး ငွေသန်းချီ ရှာသွားခဲ့ကြတာတွေ၊ သူတို့ရဲ့​ကျော့ကွင်းထဲ သက်​ဆင်းသွားတဲ့ မိန်းမပျို​တွေ ဘယ်​လောက်ထိ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရလဲ ဆိုတာ​တွေကို မြင်​တွေ့ရမှာပါ၊ နစ်နာသူ မိန်းက​လေး​တွေထဲမှာ အသက်မပြည့်​သေးသူ​တွေပါ ပါဝင်​နေတာက အ​တော်ကို ဆိုးပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လိင်ထိပါး​စော်ကားမှုအဖြစ်အပျက်​တွေ မကြာခဏဆိုသလို မြင်​တွေ့​နေရချိန် ဒီ Docuကို ကြည့်ပြီး ​ရှောင်သင့်၊ ဆောင်သင့်တာ​တွေ သိသွားနိုင်ဖို့ ​မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘယ်သူ​တွေ ...
TWICE Debut Showcase “Touchdown in Japan” (2017) Twice Debut Showcase =====================ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Once တွေအတွက် Twice အဖွဲ့ရဲ့ဂျပန်မှာပထမဆုံး Debut လုပ်ချိန်က Show လေးအကြောင်း တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်Japan မှာ Twice ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ရှိုးလေးဖြစ်သလိုတိုကျိုအားကစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ လူပေါင်း၁၅၀၀၀တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်Once တွေအတွက် ပွဲဦးထွက်ခါစ Twice အဖွဲ့ကို မြင်တွေ့ရမဲ့အပြင်TT Signal Once အတွက်ရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်းတွေကိုရောကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ရင်း ပြန်လည်နားဆင်နိုင်တာမလို့ ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် File size…2.5GB / 1.3GB Quality…1080p BluRay / 720p Format…mp4 Duration….76 Mins Subtitle….Myanmar Subtitle (Hard Sub) Encoder….YK Translated by Shwe Pyae Sone
TWICE Debut Showcase “Touchdown in Japan” (2017)
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (2022) The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (2022)==========================================IMDb Rating - 6.3/10တစ်ချိန်က World's Sex Symbol လို့ တင်စားခံရတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးကို ကျွန်တော်တို့ မွန်ရိုးလို့ ချစ်စနိုး ခေါ်ကြတယ်။ အနုပညာလမ်းကြောင်း ပေါ်ကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ အလှနဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် တစ်မဟုတ်ချင်း ကမ္ဘာကျော် ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီလောက်ပြောနေတာမှ မသိသေးဘူးဆိုရင် စကတ်လေဟပ်လို့ လက်နဲ့အုပ်ပြီး ရယ်နေတဲ့ ပါးမို့မှာ အင်မတန် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မှဲ့ပိုင်ရှင် မိန်းမလှလေးက မာရီလင် မွန်ရိုးပဲဗျာ။ ကဲ မျက်လုံးထဲ ပေါ်ပြီမလား။ဒီလိုကမ္ဘာချစ်ပြီး တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ တစ်နေ့မှာ ရုတ်ချည်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ပြောကြတာတော့ အိပ်ဆေးလွန်တာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီစတားရဲ့သေဆုံးမှုဟာ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်ဘဲ ဖုံးကွယ်မှုတွေ ရှိနေသတဲ့ဗျ။ ဒီ Docu မှာမာရီလင် မွန်ရိုးရဲ့ ဘ၀နဲ့ သူ့ရဲ့ အချိန်မတိုင်ခင် သေဆုံးမှု နောက်ကွယ်က အကြောင်းတွေကို လူတွေကို ...
Whitney,aLook Back (2022) Whitney : A Look Back (2022)ဝစ်‌တနေ ဟူစတန် (Whitney Houston)လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မသိသူမရှိလောက်အောင် ဩဇာတိက္ကမကြီးမားလွန်းလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အမျိုးသမီး အဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သင်ဟာ သူ့ရဲ့ vocal အားကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုထားတဲ့ I will always love you ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုတော့ ရင်းနှီးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကို ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊ နူးဝါ့ခ် မြို့မှာ ဖွားမြင်ပါတယ်။ အာဖရိကန်အမေရိကန်လူမျိုး၊ အဆိုကျော်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သူ ဒီအမျိုးသမီးဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရဲ့ဂရမ်မီမကျင်းပခင် တစ်ရက်အလိုဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Whitney ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဟာဆိုရင် IMDb 7.3 ရရှိတဲ့အထိကို ကောင်းမွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့မဘဝအကြောင်းရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ၊ တီဗီစီးရီးတွေများစွာထွက်ရှိခဲ့ရတဲ့အထိကို အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ သူမနဲ့ မင်းသားကယ်ဗင်ကော့စနာတို့ ...
The Real Charlie Chaplin (2021) The Real Charlie Chaplin (2021) ~ IMDb - 7.3/10, RT - 95%, Meta - 66% ~" ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ချာလီချက်ပလင် ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ဖြစ်ရင် ဒီအတိုင်းပဲကြည့်ပါ။ တခြားတွေ့ဖူးကြည့်ဖူးထားတဲ့ ချာလီချက်ပလင်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ချာလီချက်ပလင်တွေ အများကြီးရှိလို့ပါပဲ... " - မက်စ်အိစ်မန်း (စာရေးဆရာ၊ ချာလီချက်ပလင်၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦး)ချာလီချက်ပလင်ဆိုတာနဲ့ ဘောင်းဘီအပွကြီးဝတ်ထားပြီး ဦးထုပ်ဝိုင်းလေးဆောင်း တုတ်ကောက်ကိုင်ထားတဲ့ တံမြက်စည်းနှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ လူညှက်ကလေးကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ချက်ပလင်ကပ်ရောဂါလို့ တင်စားရလောက်အောင် ချာလီချက်ပလင်ကို နှစ်သက်သဘောကျ အတုခိုးကြသူတွေ ချက်ပလင်ရောဂါဖြစ်ကြသူတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှာရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလူပိန်လေးက ဘုရင်တွေ၊ ဘုရင်မတွေ၊ တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေ၊ ဘာသာရေးအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေထက် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ချာလီချက်ပလင်မဟုတ်ပါဘူး ချာလီချက်ပလင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Tramp ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးပါ။အဲဒီတော့ ချာလီချက်ပလင်က အစစ်က ဘယ်သူလဲ.....ချာလီက ...
Return to Space(2022) Return to Space(2022) အညွှန်း**************************** အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လက်မလွှတ်သင့်တဲ့Netflix ရဲ့ documentary flim လေးပါ ဒီကားထဲမှာ Elon Musk နဲ့ Space X က engineer တို့ပူးပေါင်းပြီး Mission တစ်ခုလုပ်ကြပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ NASA ရဲ့အာကာသယာဉ်မှူးတွေကို International space station ဆီပြန်ပို့ပေးဖို့ပါပဲ အဲ့ Mission အောင်မြင်လား ကျရှုံးလားဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပြည့် နဲ့‌စောင့်ကြည့်ရမှာပါ Storytelling တွေနဲ့မို့ Documentary ဖြစ်သော်ငြားလည်း ကြည့်ရမပျင်းတဲ့အပြင်ဗဟုသုတလည်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်... File Size :(2 GB), (1 GB) & (320MB( Quality : WEB-DL1080P5.1CH,720p Format…mp4 Duration…02:08:00 Genre : Documentary Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Seiji Encoded by Phyo Pyae
Return to Space(2022)
Jackass Forever (2022) Jackass Forever ဒါကတော့ Jackass film series ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ကားပါ။Jackass အစီအစဉ်တွေကတော့ အရင်အတိုင်းပဲ ထူးဆန်းတဲ့စတန့်ကွက်တွေ လုပ်ပြပြီးအဖွဲ့သားအချင်းချင်းနောက်ပြောင်ကြတာမျိုးပါ။စတန့်တော်တော်များများက အန္တရာယ်များပြီး ရွံစရာကောင်းတာတွေလည်းပါပါတယ်။တစ်ကားလုံး ပေါက်တတ်ကရတွေလုပ်ပြနေလို့ တော်တော်ရယ်ရပါတယ်။ဒီကားက Jackass ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံး rating ရထားပါတယ်။ဟိုးအရင် MTV ကအစီအစဉ်မှာတည်းက ပါ၀င်ခဲ့တဲ့ Johnny Knoxville တို့ Steve O တို့အစုံအလင်ပါ၀င်ကြပြီး Machine Gun Kelly ,Eric Andre တို့ကလည်း Guest star အဖြစ်ပါ၀င်ထားပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲက စတန့်တွေကိုအပြင်မှာတော့မစမ်းကြည့်ကြပါနဲ့ဦးနော်။Genre.....Comedy, Action, documentary Quality….WEB-DL 480p and 720p File size…(1.6GB)/(346.80MB) Format…mp4 Duration….1h 36min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... SP Encoder .....Mr. Anderson
Trust No One: The Hunt for the Crypto King (2022) Trust No One: The Hunt for the Crypto King (2022) ==================================== Cryptocurrency.... ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ စတင်​ပေါ်​ပေါက်ခဲ့တဲ့Currencyတစ်ခုဟာ ဆယ်စုနှစ်​​ကျော်ကြာ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈မှာပဲ ကမ္ဘာ့ Financial stream တစ်ခုလုံးကို အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်​လာတဲ့ digital currencyတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ၊ ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို ​ငွေသားအ​နေနဲ့ သိမ်း​နေစရာမလို၊ ဘဏ်​တွေနဲ့ဇယားရှုပ်စရာမလိုတဲ့အပြင် ကိုယ်investထားတဲ့coinတန်ဖိုးဟာ ​​ရွေးချယ်မှု မှန်သ​လောက် အဆ ရာနဲ့ချီပြီး ဈေးမြောက်သွားနိုင်တဲ့ မက်လုံး​ကြောင့် Investor​တွေ၊ အလွယ်လမ်းနဲ့သူ​ဌေးဖြစ်ချင်သူ​တွေ တဟုန်ထိုးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ နယ်ပယ်​​ပေါ့၊ ဒီလိုမနူးမနပ်လူသစ်​တွေ များလာတာနဲ့အမျှ scammerလို့​ခေါ်တဲ့ အွန်လိုင်းလူလိမ်​တွေလည်း များစွာ​ပေါ်လာပါတယ်၊ဒီDocumentaryက​ crypto​လောကမှာ အ​တော်ကိုပွဲ​ဆူခဲ့တဲ့Scammer တစ်​ယောက်အ​ကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်မှတ်တမ်းပါ၊က​နေဒါရဲ့အကြီးဆုံးCrypto exchangeဖြစ်တဲ့QuadrigaCXဟာ Investor​တွေရဲ့ keyကို နံပါတ် ၆၄ လုံးအထိ ထား​ပေးတဲ့အတွက် သိပ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့ exchangeပါ၊ Investor​တွေကလည်း အဆိုပါkey​တွေကို ကုမ္ပဏီပဲတာဝန်ယူသိမ်းဆည်း​ထားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်၊ ဒီkey​တွေကိုသိနိုင်တဲ့တစ်ဦးတည်း​သောသူက​​တော့ ...
Celeb Five: Behind the Curtain (2022) Celeb Five: Behind the Curtains (2022)Celeb Five ဆိုတာကတော့ တောင်ကိုရီးယား comedian တွေဖြစ်တဲ့ Song Eun-i, Kim Shin-young, Ahn Young-mi, Shin Bong-sun တိုနဲ့ ဖွဲစည်းထားတဲ့ girl group တစ်ခုပါ။အခု သူတိုလေးယောက်ရဲ့ mockumentary လေး Netflix ကနေ ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။Netflix ကနေ comedy show တစ်ခုအတွက် သူတိုကိုကမ်းလှမ်းလာပြီး အဲဒီအတွက် အကြံဉာဏ်တွေ၊ အိုင်ဒီယာတွေထုတ်ကြမယ့် fake documentary ပုံစံ ရိုက်ကူးထားတာပါ။Netflix မှာပထမဆုံးရိုက်ကူးကြမှာဖြစ်လို့ တခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့မတူတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေကိုထုတ်သွားကြဦးမှာပါ၊ comedian တွေပီပီ လျှာသွက်သွက်နဲ့ လုပ်သွားမှာတွေက ကလိမထိုးဘဲရယ်စရာတွေချည်းပါပဲ။ အစကတည်းက ပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား comedian တွေမို့ ဟာသပြက်လုံးတွေနဲ့ ဝါးလုံးကွဲရယ်ကြရဦးမှာပါ။ အတည်ပြောတဲ့ဟာသနဲ့ ဆွေးနွေးကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကလည်း ရယ်စရာတွေချည်းပဲမို့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်လေးမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။(အညွှန်းကိုတော့ Thuu Thinzar Kyaw ...
Rooney (2022) ဝိန်းရွန်နီ (သို့) Wazza (သို့) လူသားအဆန်ဆုံးတိုက်စစ်မှူး +++++++++++++++++++++++++++++++++++၁၉၈၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ရက်မှာ အင်္ဂလန်ရဲ့ မာဆေးဆိုက်ဒ် လို့ခေါ်တဲ့ လီဗာပူးလ်မြို့မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ခရော့တတ်အရပ်မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဂျစ်ကန် တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ တစ်နေကုန် လမ်းပေါ်မှာပဲ ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့သူဟာ တချိန်မှာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းအများဆုံးစံချိန်ရှင်၊ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အရှိန်အဝါအကြီးဆုံး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းအများဆုံးစံချိန်ရှင် ဖြစ်လာမယ်လို့ ဘယ်သူမှတပ်အပ်ပြောနိုင်မှာ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့နာမည်က "ဝိန်းရွန်နီ"ပါ။ဒီ Docuမှာတော့ ဝိန်းရဲ့ကစားသမားအစပြုရာ အဲဗာတန်အသင်းကနေ လက်ရှိဒါဘီကောင်တီနည်းပြဖြစ်လာတဲ့အထိ footageများ၊အင်တာဗျူးမှာဖြင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆိုးတေခဲ့တဲ့ ဝိန်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းရှင်၊ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းရှင်စံချိန်များမှသည် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းကြီးရဲ့ ထာဝရဂိုးသွင်းအများဆုံး စံချိန်ရှင် ( ၂၅၃ဂိုး) ၊ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံး စံချိန်ရှင် (၅၃ ဂိုး) ဖြစ်လာသူပါမန်ယူနိုက်တက်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား အောင်မြင်မှု ၅ကြိမ်အပါဆုဖလား၁၆လုံးအထိ ရရှိခဲ့ပြီး ...